३५ करोड लागतमा डिडिसीले उत्पादन गर्दैछ यूएचटी दूध ! - Arthatantra.com
३५ करोड लागतमा डिडिसीले उत्पादन गर्दैछ यूएचटी दूध !
काठमाण्डौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले नेपालमा यूएचटी दूध उत्पादन गर्ने भएकोछ । अल्ट्रा हिट ट्रिटेड (युएचटी) अर्थात उच्च तापक्रममा तताइएको दूध प्याकिङ गरी विक्री गर्ने काममा सरकारी र निजी क्षेत्रले हात हाल्न नसकिरहेको अवस्थामा डिडिसीले यस्तो दूधको उत्पादन गर्न लागेको हो ।
प्लान्ट निर्माणका लागि सरकारसँग अनुदान मागेको डिडिसीले यसैवर्ष अनुदान पाउने लगभग पक्का भइसकेको छ । सरकारले अनुदान उपलब्ध गराए लगतै डिडिसीले प्लान्ट स्थापनाका लागि काम थाल्ने छ । युएचटी दूध प्लान्टको स्थापनाका लागि ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेट भाषणमा नै यो कुराको उल्लेख भएकाले आफूहरु उत्साहित रहेको डिडिसीले जनाएकोछ ।
युएचटी दूध उच्च तापक्रममा प्रशोधन प्याकिङ गरिने दूध हो । यो तयारी दूध भएकाले बजारमा किनेर सिधै सेवन गर्न सकिनेछ । फ्रिजमा नराखेपनि यो बिग्रिँदैन भने यसलाई जहाँ पनि लैजान सकिन्छ । यसलाई उत्पादन भएको ६ देखि १० महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
२४ साउन २०७३, ९।००
वि.सं.२०७३ साउन २४ सोमवार ११:१४ मा प्रकाशित
अघिल्लाे रिचार्ज नहुँदा २ दिनमा टेलिकमको करोडौं गुम्यो
पछिल्लाे बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितद्वारा मुआब्जा माग !